सरकारी योजना कार्यान्वयनमा आए चाँडै यात्रुले १० किलोमिटर यात्रा दश रुपैयाँमै गर्न पाउनेछन् । यात्रुले इन्धनको अभाव पनि झेल्नुपर्ने छैन, न त घन्टौँ लाइन नै बस्नुपर्नेछ । कोरा कल्पनाझैँ लाग्ने यो यथार्थलाई...
र म कालो चौडामा आतुर यात्रा गरिरहेको हुन्छु ढुंगाको भारी बोकेर, आकाश झारेर, अँध्यारो छेक्न, पहाड उचालेर साँध लगाउन।...
विद्यार्थीको जोखिमपूर्ण यात्रा
खाँदबारी, १८ फागुन । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाको मोठेटारबाट खाँदबारी तुम्लिङटार पढ्न आउने विद्यार्थी अरुण नदीमा डुङ्गाबाट जोखिमपुर्ण यात्रा गर्दै । सङ्खुवासभा र भोजपुर जोड्ने लम्सुवाघाटको पक्की पुल विगत १२ वर्षदेखि बन्न नसक्दा दुवै जिल्लाका स्थानीय यसरी नै जोखिमपुर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । तस्वीरः सुजन बज्राचार्य÷ रासस
बसमा यात्रा गर्दा बान्ता हुँदा के गर्ने ?
दशैंमा घर जाने अहिले चटारो छ । सार्वजनिक यातायातमा अहिले दशैं मान्न घर जानेहरुको भिड थेगिनसक्नु हुन्छ । यस्तोमा बसमा यात्रा गर्ने कतिपयलाई बान्ता हुने गर्दछ । प्रायजसो लामो दुरीको यात्रा गर्दा बान्ता हुने गर्दछ । कसैलाई यात्रामा निस्कन साथ बान्ता हुन्छ भने कसैमा लामो यात्रा गर्दा यो समस्या देखा पर्दछ । यात्रा गर्ने क्रममा […]
मैले थाहा पाएँ मेरो यात्रा अझ कष्ट हुनेछ म तरलबाट ठोस् हुन लागेँ मैले रूप नै बद्लिएँ आफ्नो रक्षाका लागि स्वतन्त्रताका लागि।
झुण्डिएर यात्रा गर्दै सर्वसाधारण
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको दमौलीमा जीपमा झुण्डिएर यात्रा गर्दै सर्वसाधारण ।
नयाँ रितको यात्रा
प्रिया, म यात्रा गर्छु, तिमी ममा अडेस लेऊ म ओझेल हुन्छु, तिमी पनि ओझेल होऊ प्रीतमा नयाँ रित थाली, हामी यात्रा गरौँ जे-जति छ हामी बीचमा, आधा आधा गरौँ
हेर्दाहेर्दै मैले तिमी बिनाको आफूलाई स्वीकार्न थालिसकेको छु। थाहा छैन, समयको यो सत्यतालाई स्वीकार्नुलाई प्रेमको शास्त्रले कसरी परिभाषित गर्छ! सायद सँच्चा प्रेम पो मान्दैन कि तर म यसलाई यात्रा मान्छु। किनाराको यात्रा।
हवाई यात्रा सुरक्षित छ, ढुक्क भएर यात्रा गर्नुहोस् : व्यवसायी
१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बिहीबारबाट लागु हुने गरी निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ । यस्तो घोषणामा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन बन्द भएपछि हवाई यात्रा भने निरन्तर जारी रहने छ । हवाई व्यवसायीहरुको छाता संगठन वायुसेवा संचालक संघ (आयोन)ले हवाई यात्रा सुरक्षित रहेको भन्दै ढुक्क भएर यात्रा गर्न आह्वान गरेको छ । वायुसेवा कम्पनीले नेपाल […]
साउदी अरबले थप्यो यात्रा प्रतिबन्ध अवधि
रियाद: साउदी अरबले यात्रा प्रतिबन्धको समयावधि फेरि लम्ब्याएको छ। साउदी अरबको सरकारले यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको समयावधि शुक्रबार थप गरिएको घोषणा गरेको हो। नयाँ निर्णयअनुसार नागरिकले आगामी मे १७ तारिखसम्म यात्रा गर्न नपाउने अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्। कोरोनाभाइरसको महामारी खतरापूर्ण अवस्थामै रहेकाले यात्रा प्रतिवन्धको निर्णय खारेज गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले…